Social Media bụ ihe gbasara igbu | Martech Zone
Mgbe m na-arụ ọrụ na ahịa na kpọmkwem ahịa, na formulas ndị pụtara mfe. Chọpụta onye na ebe ndị ahịa gị bi, wee chọta atụmanya dịka ha. Igbu, ​​tụọ, nụchaa - ma mee ya ọzọ.
Social Media dị iche, ma eleghị anya ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ji na-ezere ya. Nsonaazụ ahụ abụghị dịka amụma. A na - enwekarị obere ma ọ bụ enweghị atụ banyere ya eme nke oma ma ọ bụ na e nweghị ohere iji sample ole na ole iji hụ otú ndị ọzọ si meghachi omume.
Social Media bụ ihe ụlọ ọrụ gị kwesịrị ịmaba n'ime isi, wee megharịa ma soro ndị na-ege ntị kwaga. Y’oburu na itukwasi obi na ngwa ahia na oru aka gi ichoro iru ndi mmadu aka, odighi uzo di nma karie ka nke taa. Companieslọ ọrụ ndị na-ada azụ na-eche, ma ọ bụ ka njọ - na-anwa i copyomi ndị ọzọ - bụ ndị ọghọm.
Paul na Buzz Marketing dere nnukwu post ụbọchị ọzọ, Ahịa ịgbanwe Omume Ndị Ahịa, ọ bụghị Àgwà. Enwere ike imetụta omume ndị ahịa, mana ụlọ ọrụ ga-enwe ike ọbọgwụ, ịkwaga ma kụọ mgbe ha kwesịrị. Ọ bụghị egwuregwu chess, ọ bụ ọgụ n'okporo ámá.
Ndị ahịa na-ama gị aka ha ahịhịa, ọ bụghị nke gị. I merie, i merie nnukwu. Ma ọ bụrụ na igosighị, nke ka njọ, ị ga-efunahụ ọgụ ahụ maka atụmanya na ndị ahịa ndị ọzọ, ị ga-aga n'aka efu.
Kedu uzo ị na-aga ite ọla edo? N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ịchọghị ụzọ - ị ga-amalite ụzọ ahụ. Mgbasa mgbasa ozi bụ banyere okporo ụzọ na-erughị ala, ọ bụghị ụzọ a kụrụ ọnwụ.
Gịnị ka ị ga-eme maka ya?
Ego ole ka netwọkụ mmekọrịta gị na ndị ọrụ gị so na ndị ọzọ na-eduzi (ọbụlagodi asọmpi ahụ)? Ọ bụla mpaghara netwọk?
Ego ole ka ndi mmadu na-ajuju ndi mmadu na-acho. Ndi ụlọ ọrụ gị nwere a Twitter akaụntụ? A Youtube Ọwa?
Ihe omume mpaghara ole ka ị na-esonye… ma ọ bụ karịa… ị na-eduga? You na-akpọta ndị ọkachamara ndị ọzọ iji nyere ndị ahịa gị aka na mpaghara ebe ị nweghị ọkachamara na ya?
Ndi blog ulo oru gi? Ndi ndi ahia gi? Ndi oru gi? Gịnị mere ị maghị?
Nke a bụ ihe dị mfe iji gbalịa. Debe akaụntụ Twitter maka ụlọ ọrụ gị ma nwee ndepụta nke ndị na-enyocha ya. Oge ọ bụla ị gbakwunye ọdịnaya na saịtị gị, mezie ọkwa na Twitter. O nwere ike iju gi anya na otutu ndi mmadu nwere mmasi!
Kwụsị ime atụmatụ. Nke a abụghị ihe ị ga - eche iji mepụta atụmatụ zuru oke na… nke a bụ ihe ịchọrọ iji gbue. Taa. Ugbu a.
N'aka ozo - nabata uwa ohuru nke ahia ahia na-agbanwe ngwa ngwa, ebe "metric" ohuru a laghachiri na nnwale!
O doro anya na ọ dị njọ - mana echere m na enwere ike ijikwa ya ma nyekwa ya oge. Echere m na nsogbu ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere bụ na ha nwere atụmanya nke ihe ga-eme.
Mgbe mbụ ha bidoro, atụmanya ndị ahụ na-apụ na windo ma na-ewepụ oge na-aga. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nwere ike ibu ụzọ 'nwalee mmiri' ma attentionaa ntị na ntụziaka ha na-aga, ekwenyere m na ha nwere ohere ka mma igbochi ọdachi na ịkpọbata ohere.
Na-enwe obi ụtọ Steve! Ọ dị mma ịhụ gị!